BED BUGS (ဂျပိုး) အပိုင်း ၁ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Know-How, DIY » BED BUGS (ဂျပိုး) အပိုင်း ၁
BED BUGS (ဂျပိုး) အပိုင်း ၁
Posted by nigimi77 on Jul 23, 2011 in Know-How, DIY | 8 comments
အမေရိကမှာ နေထိုင်ရင်း ကျုပ်တို့ လို အရှေ့ တိုင်းသားတွေ အတွက် အင်္ဂလိပ်စာ သင်ယူရတာထက် ပိုပြီး စိတ်ပင်ပန်းရတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ရှိပါတယ်။
လက်ရှိ နယူးယောက်မှာ နေတဲ့ ကျောင်းသား တစ်ယောက် ပြောပြတာကို ပြန်ရေးထားတာပါ။ သူ့ ရဲ့ဇာတ်လမ်းကို နားထောင်ပြီး အမေရိကန် နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အကြီးမားဆုံး ပူပန်မှုက ဘာလဲဆိုတာကို စဉ်းစားမိခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကား မကျွမ်းကျင်လို့ဆက်ဆံရေး အဆင်မပြေတာထက်ပိုပြီး စိတ်ပင်ပန်းရတဲ့အကြောင်း… ဒါမှ မဟုတ် အထီးကျန်ခြင်းလား…..။
ဒါပေမဲ့လည်း သူ့ ရဲ့ အဖြေကို နားထောင်လိုက်ရတဲ့ အခါမှာ တကယ်ကို ထင်မထားခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာ ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ အထီးကျန်တဲ့ ဘ၀ကို ပိုပြီးစိတ်ပင်ပန်းစေတဲ့ ကိစ္စ….
တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး…အခန်းထဲမှာ ရှိတဲ့ ဂျပိုး(ကြမ်းပိုး) ကို နှိမ်နင်းရတဲ့ ၀ဋ်ဒုက္ခ ပါပဲ…။ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ နှိပ်ကွပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်း အချည်းနှီးပါပဲ။
၀ယ်ထားတာ မကြာသေးတဲ့ မွေ့ ရာကို လွှင့်ပစ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အသစ်လဲထားတာ မကြာသေးတဲ့ ကြမ်းခင်းကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အသစ် ထပ်လဲပစ်မှာလား…..။
The developed countries လို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ Least developed countries ရဲ့ဘ၀မျိုး နေနေရပါလား….။
အရှေ့ တိုင်းသားတွေ အသွားများတဲ့ Mart တွေမှာ အံသြလောက်စရာပင် “ဂျပိုး ဖမ်းတဲ့ ဆေး ရပါပြီ” ဆိုတဲ့ စာတမ်းက ကြီးမားထင်ရှားစွာကပ်ထားကြပါတယ်။ အမေရိကမှာ ခံနေရတဲ့ ဒုက္ခကို မကြည့်ရက်လို့ဘေးအိမ်က ဦးလေးကြီးက သူ့ ရဲ့ကိုယ်ပိုင် နည်းလမ်းကိုလည်း ပေးခဲ့ပါတယ်။
(NaclO) ဖြန်းပေးခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်သာ သန့် ရှင်းရေး လုပ်တဲ့ အခါမှာ အသုံးများတဲ့ (NaclO) ကို အားပျော့အောင် ရောစပ်ပြီး စပရေး အနေနဲ့အခန်းထဲမှာပက်ဖျန်းရပေမဲ့သတိထားရမဲ့ အချက်တွေ အလွန်များပါတယ်။ အခန့် မသင့်ရင်တော့ ကာကီရောင် ဘောင်းဘီဟာ စစ်ဘောင်းဘီပုံစံ ဖြစ်သွားနိုင်သလို
အပြာရောင် တီရှပ်ဟာလဲ အညိုရောင် မြေပုံကွက်တွေ ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဂျပိုးကို တကယ်ပဲ နှိမ်နင်းနိုင်လားဆိုတာ မသိပေမဲ့ အနည်းဆုံးတော့ စပရေး ဖြန်းပေးထားတဲ့ ညမှာတော့ တော်တော်လေးကို ဂျပိုးရန် ကင်းရှင်းခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း အနံ့ က ပြင်းထန် ဆိုးဝါးလွန်းတော့ အိပ်ခန်းထဲမှာ ဆေးဖြန်းပြီး ဧည့်ခန်းမှာပဲ အိပ်ရတဲ့ ညတွေက ပိုပိုပြီး စိပ်လာပါတော့တယ်…။
ဆေးဆိုင်ကို သွားရင် အဆီ (ဒါမှမဟုတ်) အတုံးအခဲ အနေနဲ့ ရောင်းတဲ့ ပိုးသတ်ဆေး တွေရှိပေမဲ့လည်း မျှော်လင့်ထား သလောက် မထိရောက်ပါဘူး။
World Mart လို ဟာမျိုး Mart အကြီးစားတွေမှာတော့ ဂျပိုး မကပ်နိုင်တဲ့ ပိုလီအက်စတာ မွေ့ ယာ အစွပ်တွေ လည်း ရောင်းပါတယ်။
တကယ့်ကို နည်းလမ်း အစုံအလင်ကို သုံးခဲ့ဖူးပေမဲ့လည်း ထိရောက်မှု မရှိပဲ လက်လျှော့ပြီး မိမိတိုင်းပြည်ကို ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
သေချာတာကတော့ မိမိနိုင်ငံမှာ ဂျပိုးကိုက်ခံရတဲ့ ဒုက္ခ မရှိခဲ့ပါဘူး…။
ဒါပေမဲ့လည်း လောလောလတ်လတ်ကို Korea မှာလည်း ဂျပိုးကို ရှာဖွေတွေ့ ရှိခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ သီတင်းက TV မှာ ပြလာပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ လောက်အထိ အစအနတောင် မရှိတဲ့ ဂျပိုး ဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါက Seoul မြို့ မှာရှိတဲ့ စုပေါင်းအိမ်ရာ တစ်ခုမှာ ရှာဖွေတွေ့ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အဆိုအရတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံကနေ ပြန့် ပွားလာချေ များတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ချက်ချင်း ဆိုသလိုပဲ …. ကျွန်တော်တို့ မိသားစုကို
အလွန် ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ ဂျပိုးက ဆိုလ်းမြို့အထိရောက်လာပြီဆိုတော့ တကယ့်ကို အံ့မခမ်း အားထုတ်မှုပါပဲ။ ဆံပင်မွှေးတွေတောင် ထောင်သွားလောက်အောင်ကို ကြက်သီးထလာပါတော့တယ်….။ သတင်း အရဆိုရင် အဲဒီ ဂျပိုးဟာ အညိုရောင် ပြောင်ပြောင် ၊ ကိုယ် အရှည် 6.5~9mm ရှိတဲ့ အင်းဆက် (Insect)ဖြစ်ပြီး ၊ အိမ်တွေထဲမှာ နေထိုင်ပြီး ပြင်းထန်ဆိုးဝါးတဲ့ အနံ့ ရှိပြီး ရှည်လျားတဲ့ ပါးစပ်နဲ့လူတွေ (ဒါမှမဟုတ်) တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ သွေးကို စုပ်ယူတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အမေရိကမှာ မြင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဂျပိုးကတော့ အညိုရောင်တင်မကဘူး ခဲရောင်(ဆေးလိပ်ပြာ အရောင်) တောင် ရှိပါတယ်။
Yonse University က Insect သုတေသန ဋ္ဌာန အကြီးအကဲရဲ့ အဆိုအရ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ၁၂ လပိုင်းမှာ လာရောက်တွေ့ ဆုံတဲ့ အသက် ၃၀ အရွယ် အမျိုးသမီးက သူ့ အိမ်ကနေ ဖမ်းလာတဲ့ ပိုးကောင်ကို စစ်ဆေးကြည့်တဲ့ အခါ နှစ်ပေါင်း ၂၀ လောက်ကြာအောင် ပြည်တွင်းမှာ မတွေ့ နိုင်ခဲ့တဲ့ ဂျပိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို အတည် ပြုခဲ့ပါတယ်။
ပြသာနာက ဒီ ဂျပိုး ဆိုတဲ့ အကောင်ဟာ ပြည်တွင်းမှာပဲ ပေါက်ဖွားလာတာလား ဒါမှမဟုတ် ပြည်ပကနေ ကူးဆက် ပြန့် ပွားလာတာလား ဆိုတာနဲ့ပါတ်သပ်ပြီးအငြင်းပွားနေခဲ့ကြပါတယ်။ သုတေသန အဖွဲ့ ရဲ့အဆိုအရတော့ ဂျပိုးဟာ အမေရိက ကနေ ၀င်ရောက်လာတယ် တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိ ဂျပိုး အကိုက်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးဂျာဆီပြည်နယ်မှာ ကြာမြင့်စွာ နေထိုင်ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ၉ လ လောက်က
ပြန်ရောက်လာတဲ့ အချက်ကို ကြည့်ပြီး ကောက်ချက်ချတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သုတေသန အဖွဲ့ က နှစ်ပေါင်း ၂၀ လောက်ကြာအောင် မတွေ့ ခဲ့ရတဲ့ကိုရီးယားပြည်ပေါက် ဂျပိုး မဟုတ်ပဲ အမေရိကန်ုပြည်ပေါက် ဂျပိုးက ပိုးမွှားသန့် စင်ရေး စနစ်ကို အောင်မြင်စွာ ထိုးဖောက်ပြီး ပြည်တွင်းကို ကူးစက်ပြန့် ပွားလာတယ်လို့ခန့် မှန်းကြောင်းကို ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ သတင်းထဲမှာပဲ ပိုးသတ်နှိမ်နင်းရေးလုပ်ထားပြီး လောလောဆယ်မှာ ဂျပိုး မျိုးပြုတ်သွားပြီလို့ ဆိုပါတယ်…..။ တကယ်ကို ပဲ မျိုးပြုတ်သွားပြီတဲ့လား…..။ အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံထက်ကို ပိုပြီး လူနေထိုင်မှုစနစ် နိမ့်ကျပြီး ညစ်ပတ်လို့ ပဲဂျပိုး ဖြစ်ထွန်းနေတာလား ….။ အဲဒီလို ကြိမ်းသေပေါက် ပြောဖို့ ဆိုတာ အလွန်ကို ခက်ခဲပါတယ်…။
“ဂျပိုးဟာ အနေအထိုင် သပ်ရပ် သန့် ရှင်းရင် မရှိနိုင်ပါ”…………………လုံးဝ မဟုတ်ပါ ခင်ဗျား…….။
အဲဒီလို မဟုတ်တာက အဓိက ပြသာနာပါ။ လူနေအိမ်တွေမှာ ဂျပိုး တစ်ကောင် ရောက်လာပြီဆိုရင် အံသြဖွယ် မျိုးပွားနှုံးနဲ့အခန်းတွေတင် မက အဆောက်အဦးရဲ့နေရာတိုင်းမှာ အလွန်လျင်မြန်စွာ ပေါက်ဖွားလာပါတော့တယ်။ ဒီ့ အပြင် ဂျပိုး အကိုက်ခံရရင် ကိုက်ရာထင်ပြီး ရောင်လာတတ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုမှ အောင့်အီးပြီး မနေနိုင်လောက်အောင် ယားယံလာပြီး မကုတ်ပဲ မနေနိုင်တော့ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် လက်၊ခြေထောက်၊ ဗိုက် အစရှိတဲ့ နေရာတွေမှာအကိုက်ခံရရင် သိသိသာသာ ရောင်တက်လာပါတယ်။ အဲဒီ ဝေဒနာဟာ အိပ်စက်လို့ ကို မရနိုင်တော့ပါဘူး။ ကလေး သူငယ်တွေ အတွက် ပိုဆိုးပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ အချက်က အမေရိကန်ပြည်ပေါက် ဂျပိုးဟာ ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းတာတောင်မှ တော်တော်နဲ့မသေဘူး ဆိုတာပါပဲ။
အမေရိက မှာတော့ 1950 ခုနှစ်လောက်က အသုံးပြုခဲ့တဲ့ DDT ဆိုတဲ့ ပိုးသတ်ဆေး ကို အသုံးပြုခွင့် မရှိတော့ပါဘူး။ DDT ဟာ လူကို ထိခိုက် အဆိပ်သင့်စေတဲ့အတွက် အသုံးပြုခွင့် ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ် အသက် ၅၀ အထက် လူတွေဟာ ဂျပိုးနဲ့ သန်းကို သတ်ဖို့ အတွက် အဖြူရောင် အမှုန့် ကို ကိုယ်ခန္ဒာနဲ့အ၀တ်မှာ ဖြူးပြီး
လုပ်ခဲ့တဲ့ အတွေ့ အကြုံကို မှတ်မိကြမှာပါ။ အဲဒါဟာ DDT ပါပဲ။ အမေရိကမှာ အခုတလော Pires Lloyd အနွယ်ဝင် ပိုးသတ်ဆေးကို အသုံးပြုနေပါတယ်။
ရှင်းရှင်းပြောရရင် အခုတစ်လော ပေါ်ထွက်လာတဲ့ ခြင်ဆေးမှာ အသုံးပြုတဲ့ပိုးသတ်ဆေးမျိုးပါပဲ။ မက်ဆာချူးဆက် တက္ကသိုလ်နဲ့ဆိုလ်း တက္ကသိုလ် ပေါင်းပြီးပြုလုပ်ထားတဲ့ ဂျပိုးနှိမ်နင်းရေး နည်းလမ်း အပြင် မအောင်မြင်တဲ့ အကြောင်းရင်းကို လေ့လာခဲ့ပါတယ်။
ရလာဒ်ကတော့ ဂျပိုးဟာ Pires Lloyd အနွယ်ဝင် ပိုးသတ်ဆေး ပီးတဲ့ သတ္တ၀ါတွေ ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကို တွေ့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် အင်းဆက်ပိုးမွှား
သုတေသန ပွဲမှာ ကြေညာခဲ့တဲ့ အချက်က Pires Lloyd အနွယ်ဝင် ပိုးသတ်ဆေးဟာ ဂျပိုးရဲ့အာရုံခံဆဲလ် မှာရှိတဲ့ Electrical signal ကို ထိမ်းချုပ်တဲ့ Geneကို ပြောင်းလဲ ပြစ်လိုက်ပြီး Nerve တွေကို ပျက်စီးပြီး သေသွားစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဆိုလ်းတက္ကသိုလ်က သုတေသန ပညာရှင်ရဲ့ စကားအရဆိုရင်တော့ပိုးသတ်ဆေးပြီးတဲ့ ဂျပိုးဟာ ပိုးသတ်ဆေးကို ဖြန်းပေမဲ့လည်း Gene က မပြောင်းလဲတဲ့ အတွက် မသေရုံတင် မကဘူး ပိုးသတ်ဆေးကို ပိုပြီးတောင် ခံနိုင်ရည် ရှိစေတဲ့ အတွက် သာမာန် ဂျပိုးထက်ကို အဆပေါင်း 264 ဆ ပိုပြီး ခံနိုင်ရည် အားကောင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲဒီလို ပိုးသတ်ဆေး ပီးတဲ့ အင်းဆက်တွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာက ကျွန်တော်တို့ ကို ထိတ်လန့် စေခဲ့တဲ့ ကလေးတွေရဲ့ဆံပင်ထဲက သန်းတွေ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Tag က ဘယ်လို ဖြစ်လို့ရေနွေးကြမ်း ဆိုတာက ပါလာတာလဲ။ ကိုခိုင်ရေ လုပ်ပါဦး။
ကြမ်းပိုးက.. ယူအက်စ်တနိုင်ငံလုံးဆိုတာထက်.. နယူးယောက်မှာ အဓိကရှိတာပါ..။
ကြမ်းပိုး၊ ကြွက်၊ ပိုးဟပ် ဆိုတာ နယူးယောက်မြို့ရဲ့ အိမ်မွေးသတ္တဝါများဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်က သန့်သန့်ရှင်းရှင်း နေတတ်ရင်တော့ ဒင်းတို့ကို ပိုချစ်သူများဆီကို သွားမှာပါ။
264 ဆ ပိုပြီး ခံနိုင်ရည် အားကောင်းလာတယ် ဆိုတာဖတ်လိုက်ရတော့…. သေပြီဆရာ ….။
လင်းနို့ရဲ့ သန်းက ဂျပိုးလို့လဲ ပြောကြတယ် ။
ဂျပိုးက တွယ်မိရင် မရတော့ဘူး ဘယ်လောက် သတ်သတ် တစ်ကောင်လောက်ကျန်ခဲ့တာနဲ့ အချိန်တို ခဏလေး အတွင်းမှာကိုပဲ အုံနဲ့ ကျင်းနဲ့ကို ပြန်ဖြစ်လာကြတာပဲ …
အိမ်မှာနေတော့ အိမ်မြှောင် ကျောင်းမှာနေတော့ကျောင်းမြှောင် ဆိုတဲ့ထုံးကိုမူပြီး
အဲ့သည်သတ္တဝါရဲ့မှီရာတည်ရာ နေရာကိုမှီပြီး နာမည်ပေးရင်ကောင်းမယ်
ဟိုကြားပိုး ဒီကြားပိုး ဘာညာမလုပ်ဘဲနဲ့ ဘယ့်နှယ် ကိုယ့်နာမည် ဂျပိုး ဆိုပြီးလာကြော်ငြာနေရတာလည်း
နည်းနည်းတော့ ကြားမကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ ဒါပေမယ့် တစ်ကယ့်ကိုယ်တွေ့
လူတွေရဲ့အမြတ်တနိုးထားတဲ့ ဦးခေါင်းက ဆံပင်တွေမှာ
လင်ယူသားမွေး အိမ်ထောင်မှုပြု ကြတဲ့သတ္တဝါတွေကို သန်းလို့ခေါ်ကြတာပေါ့လေနော
မျက်စေ့နဲ့မမြင်ရတဲ့ သတ္တဝါတွေတော့ မပြောတော့ဘူး
လူ့ရဲ့ အမွေးမှင်တွေမှာ တွယ်ကပ်နေပြီး လူ့သွေးကိုစုပ်တာ သန်းတစ်မျိုးထည်းမဟုတ်ဘူး
ကြားပိုးလိုဘဲ တစ်ပုံစံထည်းဘဲ ဒါပေမယ့် သေချာကြည့်မှ တွေ့ရတာ
လူတစ်ယောက် နေရောင်ထည်းမှာ ထိုင်ပြီး တစ်စုံတစ်ခုကို သဲသဲမဲရှာနေတာ
ဖင်ချထိုင်ပြီး ချေဖဝါးနှစ်ဖက်ကိုပူးပြီး ဒူးခေါင်းကို ဖြဲပြီးထိုင်တာ
( ဒေါက်တာ အီးတုံးပြောတဲ့ ထိုင်မတတ်တော့ ဖြဲပြသလို ဆိုတာနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပေါ့ )
အဲ့သည်လိုထိုင်နေပြီး သူ့အောက်က ( ကန်တော့ဗျာ ) အမွေးတွေကို သူဘာသာ
ခဏနေတော့ အဲ့သည် စောစောကပြောတဲ့ ကြမ်းပိုးလို ပိုးတစ်ကောင်တွေ့တယ်ဗျ
သူပြောပုံက တော်တော့် တော်တော်ကိုယားလို့ နေရောင်ထည်းမှာ သေခြာရှာကြည့်တာ
တော်တော်ညစ်ပတ်တဲ့ကောင် -ီး မှာတောင်သန်းတွယ်တယ်ပေါ့
ဒါပေမယ့် သန်းနဲ့မတူဘူး ကြမ်းပိုးနဲ့တော်တော်တူတယ်
ဦးပုည ထင်တယ်.. ရေးဖူးတယ်…။
အဲဒီအကောင်ကို… ဂျပ်ကောင်တဲ့..။ ဗဟုသုတအဖြစ်ပါ..။
ကိုnigimi77ရေ ဗဟုသုတ အတွက် ကျေးဇူးပါ။ တချို့ဆို ဂျပိုးအကိုက်ခံရတာနဲ့ allergy ဖြစ်တာတွေ့ဖူးတယ်။ တကိုယ်လုံး အဖိန့်ဖိန့်တွေ ဖြစ်တာ။